Raadinta duulimaadyada raqiiska ah - duulimaadkiinnu waa kan ugu wanaagsan
Soo hel duulimaadyada ugu fiican qiimaha ugu fiican Waa suurtagal mahadsanid raadinta duulimaadyada iyo bogagga isbarbar dhigga ee ka jira internetka oo in badan oo safrayaal ah u adeegsadaan inay ku badbaadiyaan kuna safraan qiimo jaban
Adeegsiga mashiinka raadinta duulimaadyada raqiiska ah waxaad awoodi doontaa inaad heshid oo aad ku iibsato tigidhka diyaaraddaada qiimaha ugu fiican iyo dhammaan dammaanadaha. Waa xalka ugu fudud uguna dhaqsaha badan waana midka aan kugula talinayno Absolut Viajes.
Laakiin ma jiro kaliya xulashadan, waxaa jira degello internetyo kale oo badan oo shabaqa ku jira. Maxay yihiin kuwa ugu fiican? Hagaag, maadaama safar kasta uu leeyahay bogag uu jecelyahay, halkan waxaan kusoo bandhigi doonaa kuwa aan ugu jecel nahay:
Duulimaadyada: wakaaladda socdaalka ee caanka ah waxay ku siineysaa dhamaan duulimaadyadeeda qiimaha ugu fiican riix halkan.
eDreams: Mid ka mid ah wakaaladaha safarada ugu waaweyn adduunka, haddii aad rabto inaad hesho duulimaad raqiis ah halkan guji.
Skyscanner Waa mid ka mid ah matoorada baadi goobka duulimaadyada ugu isticmaalka badan adduunka. Isbarbar dhig kumanaan ikhtiyaar oo ku hel duulimaadka aad raadineyso qiimaha ugu jaban riix halkan.
Qabso: Waad heli kartaa oo isbarbar dhigi kartaa kumanaan duulimaad oo ku mahadsan mashiinkan raadinta. Si aad u gasho oo aad ugu qorto qiimaha ugu fiican halkan guji
Liligo: Liligo waxaan ka heli karnaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ballansatid duulimaad raqiis ah oo leh dhammaan dammaanadaha. Halkan guji
Dambeyn wuxuu ku siinayaa duulimaadyo kala duwan. Halkan gal oo isbarbar dhig dhammaan qiimaha si aad u hesho duulimaadka aad raadineyso.
Mid ka mid ah gaadiidka ugu amniga badan uguna dhaqsaha badan waa diyaaradda. Waad ku mahadsan tahay isaga, waxaan bilaabi karnaa qorsheynta safarkayaga soo socda. Meelaha la aadayo waxay u kala duwanaan karaan sida maskaxdeennu noo saamaxdo. Dabcan, ugu horreyntii, waxaa ugu wanaagsan inaan bilowno meesha aan dhab ahaan ku qasbanahay inaan ku qabanno: raadinta duullimaadyo raqiis ah.
Haddii keligeed, fasax ahaan aan uga tagi doonno miisaaniyad sare, had iyo jeer maahan inay ku saleysnaato duulimaadyada. Maanta waxaa jira faa'iidooyin iyo qiimo dhimis fara badan, halkaas oo aad ka heli karto qaar duulimaadyada qiimaha jaban, ku dhowaad la'aan feker.
1 Raadinta duulimaadyada raqiiska ah
2 Safarka diyaaradda
3 Faa'iidooyinka ballansiga duulimaadka khadka tooska ah
4 Raadi duullimaadyo raqiis ah oo tagaya halka aad rabto
5 Sidee mashiinka raadinta duulimaadyada raqiiska ahi u shaqeeyaan
6 Meelaha ugu waaweyn ee lagu tago diyaaradda
6.1 Duulimaadyo jaban oo taga London
6.2 Duulimaadyo jaban oo tagaya Madrid
6.3 Duulimaadyada qiimaha jaban ee Barcelona
6.4 Duulimaadyo jaban oo tagaya Paris
6.5 Sida diyaarad loogu raaco Rome
Faa'iidooyinka ballansiga duulimaadka khadka tooska ah
Mid ka mid ah fikradaha ugu fiican markay tahay diyaarso duulimaad khadka tooska ah, waa in si raaxo leh loo sameeyo, iyada oo aan cidna caawimaad ka helin. Waxaan u ballan qaadaynaa waqti badan, laakiin maxaa yeelay waxaan u baahanahay inaan isbarbardhigno oo aan aqrinno dhammaan macluumaadka uu internetku na siinayo.
Ku raadi si faahfaahsan: Ugu horreyntii, waa inaan qabannaa mashiin raadin wanaagsan, sida kan aan kuu soo bandhigno. Muhiim ma aha wax aad u dhib badan, laakiin in la ogaado in aan si sax ah u heli doonno waxa aan raadineyno. Wax fudud oo dhakhso leh oo ka dhigaya shaqadeena mid fudud. A mashiin raadin wanaagsan waxay lahaan doontaa sanduuq ay ku buuxiso meesha laga soo jeedo ilaa meeshii loo socday. Sidoo kale, bixitaanka iyo soo noqoshada ayaa lagama maarmaan u ah in lagu guuleysto safarkayaga. Ilbidhiqsiyo gudahood gudahood ayaan ku haysan doonnaa dhammaan duulimaadyada raqiiska ah ee wali kuraasta fadhiya.
Xaraashka: Shaki la'aan, dalabyada sidoo kale waa nidaamka maalinta. Marka, dhib malahan in la fiiriyo degello internet oo kala duwan si loo is barbar dhigo qiimaha ugu fiican. Hubso in dhammaantood, kharashka ugu dambeeya si fiican loo cayimay, oo ka muuqan doona qiimaha. Ha ku qaadin dalabyo waaweyni, adigoon si fiican u akhrin daabacaadda wanaagsan.
Xasiloonida maskaxda iyo raaxada: Dabcan waxan oo dhan waxaan ku sameyn doonaa guriga. Sabtida iyo axada, markaan waqti dheeri ah haysanno, waxay noqon kartaa waqtiga ugu habboon. Sidan oo kale, waxaan awoodi doonnaa inaan ku soconno hab deggan, isbarbardhiga dhammaan noocyada duulimaadka iyo waliba dalabyo naloo soo bandhigay. Xaqiiqdii dhowr guji waxaad kuheleysaa waxkasta oo aad ugubaahantahay safar lama ilaawaan ah.
Raadi duullimaadyo raqiis ah oo tagaya halka aad rabto
Sidii aan horey u soo sheegnay, marka hore waxaan ka fikiraynaa meesha aan rabno inaan booqano. Hadda oo aan muuqaal ka helnay, maxaan sameyn karnaa si aan u helno duulimaadyo rakhiis ah?
Fududeyn: Shaki la'aan, dabacsanaanta jadwalka ayaa ah mid kamid ah hubkeenna ugu fiican ee lagu gaari karo wanaag heshiisyada duulimaadka. Maskaxda ku hay in qiimuhu kor u kici doono markaan doorano meelaha caanka ah iyo meelaha dalxiiska. Si la mid ah, waxaan wada ognahay marka xilliyada ugu sarreeyaa yihiin iyo saameynta ay ku yeelan doonaan qiimaha sidoo kale. Qalabkeena raadinta duulimaadka, waxaad awoodi doontaa inaad ku ogaato meelaha aadan xitaa ka fikirin laakiin qiimeyaal aad u fiican. Dariiq lagu qaado oo lagu ogaado meelo u gaar ah.
Diyaarso duulimaadka goor hore ama goor dambe?: Had iyo jeer shaki weyn ayaa ku jira su’aashan. Ma fududa in laga jawaabo. Waxay ku xirnaan doontaa dhowr arrimood, laakiin waxaan dhihi karnaa in labadaba horay loo sii qabsado iyo goor dambe ay horseedi karto kororka qiimaha tikidhada. Maxaan ka qaban karnaa kiisaskan?. Waa hagaag, sida caadiga ah waxaa la yiraahdaa ugu horreyntii, ballanso dhowr bilood ka hor. Dhinaca kale, ugu dambayntii, illaa saddex ama afar toddobaad ka hor intaadan safarkaaga bilaabin. Sida laga soo xigtay tirakoobka wakaalada, waxaa la dejiyay in waqtiga saxda ah ee lagu iibsado duulimaad jaban ay tahay qiyaastii 55 maalmood ka hor. Waqtigaan ka dib, qiimayaashu mar kale way kici karaan, markaa had iyo jeer feejignow.
MiisaankaIn kasta oo mararka qaar ay dhib noqon karto, haddana waxay kaloo fure kale u tahay helitaanka duulimaadyo qiimo jaban. Shaki la'aan, waxaa jira meelo loo baahan yahay oo in kasta oo ay noo leexiyaan meel kale, waxa muhiimka ahi waa natiijada ka soo baxda qiimaha ugu dambeeya. Habka ugufiican ee loogu lumi karo aaggaas oo aynaan ogeyn taasna waxay na siin doontaa waqti aan ku aragno ka hor intaanan mar kale tegin.
Sidee mashiinka raadinta duulimaadyada raqiiska ahi u shaqeeyaan
Shaki la'aan, mishiinka raadinta duulimaadku waa mid ka mid ah qalabka ugu fudud ee la isticmaali karo. Malaha maxaa yeelay waxay kaliya leedahay sanduuqyadan muhiimka ah si ay u noqdaan kuwo kooban oo ku saabsan raadintayada. Marka hore, waxaad tilmaami doontaa asalka. Waxaad si toos ah u dooran kartaa garoonka diyaaradaha kuugu dhow iyo sidoo kale magaca magaaladaada. Si la mid ah, waa inaad ku sameysaa wax la mid ah meesha saxda ah. Goobtaas oo aad ku raaxeysaneyso fasaxaaga aad u qalantay.
Marka tan la buuxiyo, waa inaan tagno maalmaha duulimaadkeenna. Kalandarka ayaa la soo bandhigi doonaa, markaa waa inaad doorataa maalinta gaarka ah. Intaas waxaa sii dheer, waad kala dooran kartaa inay tahay a hal wado ama safar wareeg ah. Fudud, sax? Hagaag, waa inaad riixdo badhanka, "Raadi" waana intaas. Waqtigan xaadirka ah xulasho faahfaahsan oo dhammaan xulashooyinka ayaa soo bixi doona. Websaydhyo kala duwan oo ku siiya duulimaadyada ugu fiican qiimo weyn. Marka waad isbarbar dhigi kartaa oo aad dooran kartaa midka adiga kugu habboon.
Meelaha ugu waaweyn ee lagu tago diyaaradda
Mid ka mid ah meelaha ugu muhiimsan waa London. Sannad kasta waxaa jira dalxiisayaal badan oo u yimaada inay ogaadaan caasimada England. Marka, waxaad ka heli kartaa duulimaadyo raqiis ah oo taga London markasta oo aad rabto. Waxaa jira shirkado badan oo iyaga siiya waana taas sababta, mashiinka raadinta aad isbarbar dhigi karto dhammaan shirkadaha diyaaradaha, iyo sidoo kale jadwalkooda iyo qiimahooda. Kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah Vueling, Ryanair ama Air Europa. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ka dhoofaysaa garoomada diyaaradaha waaweyn iyo dhowr saacadood maalintii. Ma haysatid cudurdaar macquul ah inaadan tegin!
Duulimaadyo jaban oo tagaya Madrid
Sidoo kale, caasimada Spain waxaa soo gaara booqashooyin badan. Duulimaadyada Madrid badanaa waa ka jaban yihiin in laga tago waxa ugu horeeya subaxa. Intaas waxaa sii dheer, maalmaha shaqada ayaa sidoo kale muhiim u noqon doona si loo arko hoos u dhaca qiimaha ugu dambeeya. Saacad gudaheed waxaad kujoogi doontaa meesha aad u socoto.
Barcelona waxaan ku kulmi doonnaa garoonka diyaaradaha ee El Prat. Waa tan labaad ee ugu weyn Spain, sidaa darteed duulimaadyada iyo rakaabka soo booqda maalin kasta lama tirin karo. Waxay leedahay saddex aag oo laga baxo iyo sidoo kale aag ay soo degto. Waxay leedahay dhowr shirkadood iyo sidoo kale shirkado caalami ah, markaa way fududaan doontaa had iyo jeer hel duulimaadyo qiimo jaban.
para u duulo parisWaxaan haynaa shirkado kala duwan sida Iberia, Air Europa, British Airway ama Vueling, iyo kuwo kale. Had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa meesha loo socdo iyo meesha la imanayo. Paris waxay leedahay saddex garoon diyaaradeed. Charles de Gaulle, Orly iyo Beauvais. Dhamaantood waxay aad ugu xirnaayeen xarunta.
Sida diyaarad loogu raaco Rome
Haddii aad rabto u duuli RomeWaa inaad ogaataa inay leedahay laba garoon diyaaradeed oo caalami ah. Tani waa sababta oo ah taraafikada booqdayaashaada ayaa isdulsaaraya sanad walba. Qaar ka mid ah shirkadaha qiimaha jaban ee yimaada waa Vueling, Ryanair ama Easyjet. Iyaga dhexdooda, waxaad had iyo jeer ka heli kartaa waxay ku bixisaa wax ka yar 30 eurointaad sidato oo keliya shandadaha gacanta. Barcelona, ​​Ibiza, Madrid ama Seville ayaa ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee duulimaad toos ah ku tagaya Rome.
Sidaad aragtay, waxaa jira meelo badan oo la booqdo iyo qiimo jaban oo badan oo aan ku raaxeysan karno. Kaliya waa inaad doorataa maalmaha oo aad bilowdaa inaad ku raaxeysato fasaxaaga sidaad ugu qalantay.